अब टिभीको रिचार्ज गर्दा पनि थप कर तिर्नुपर्ने
काठमाडौं ।मनोरञ्जनको टिकटमा ५ नं प्रदेश सरकारले ५ प्रतिशत कर लगाउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि नै मनोरञ्जनको टिकटमा पांच प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव गरेपनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको..
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा ८६ जनालाई अख्तियारले बोलायो-नामावलीसहित
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको बहुचर्चित जग्गा प्रकरणमा मुछिएका ८६ जनालाई बयानका लागि बोलाएको छ । बुधबार अख्तियारले नाम र कित्ता नम्बरसहित सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै ललिता निवास प्रकरणमा..
आज देशैभरका स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदै, कस्तो ल्याउलान् बजेट ?
काठमाडौं । देशभरका कूल ७५३ वटै स्थानीय तहले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट ल्याउने भएका छन् । केही स्थानीय तहले सोमबार नै बजेट ल्याएका छन् । नेपालको संवैधानिक प्रावधान..
अबदेखि भारत जान नेपालीलाई भिसा चाहिने
काठमाडौं । अब भारत जान नेपालीका लागि भिसा आवश्यक पर्ने भएको छ । भारतस्थित नेपाली दूतावासले एक सूचना जारी गर्दै चीन, मकाउ, हङकङ र पाकिस्तानबाट भारत जाने नेपालीहरुका लागि भारतको..
नेल लगाएर निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको उपचार वीर अस्पतालमा
काठमाडौं । निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको स्वास्थ्यस्थिति सुधारोन्मूख रहेको वीर अस्पतालले जनाएको छ। ढाडको नसामा समस्या देखिएपछि चौधरीलाई प्रहरीले बिहीबार साँझ पाँच बजे वीरमा भर्ना भएको अस्पतालका निर्देशक डा केदार..
जिल्ला इन्चार्ज मारिएको विरोधमा नेपाल बन्द आह्वान
काठमाडौं । आफ्नो पार्टीका सर्लाही जिल्ला इञ्चार्ज कुमार पौडेल मारिएको विरोधमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यही असार १० गते नेपाल बन्द आह्वान गरेको छ । महासचिव विप्लवले शुक्रवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै..
कुलमानमाथि पनि ट्रेड युनियन दबाब, कार्यालयमा तालाबन्दी
काठमाडौं । सरुवाको विषयलाई लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि कर्मचारीहरुले पहिलो पटक प्राधिकरणको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् । प्राधिकरणले..
प्रहरी र विप्लव समूहबीच दोहोरो भिडन्त, जिल्ला इञ्चार्ज मारिए
काठमाडौं । सर्लाहीको लालबन्दीमा बिहीबार प्रहरी र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहका कार्यकर्ताबीच गोली हानाहान हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ। विप्लव समूह र प्रहरीबीच दोहोरो भिडन्त हुँदा सर्लाही जिल्ला इञ्चार्ज..
मानिससँग घुलमिल गरेको भन्दै भालुलाई मारे
एजेन्सी । अमेरिकाको ओरेगनस्थित जंगलमा एक भालुलाई मानिसहरूसँग घुलमिल गरेको आरोपमा मारिएको छ । अधिकारीहरूले ट्विटरमा भालु मारेको कुरा स्वीकार गर्दै लेखे, ‘उसले मानिसहरूसँग घुलमिल खतरनाक कुरा हो । पहिला त..
प्रधानमन्त्रीले भने मेलम्ची खानेपानी बारे मलाई गलत ब्रिफिङ भयो, धोका भयो
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणका विषयमा आफूलाई गलत ब्रिफिङ भएको बताएका छन्। सरकारी निकायका उच्च अधिकारीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण सकिन्छ भनेर तोकेको मिति अगाडि..
१०० रुपैयाँमा सबै रोगको उपचार गर्ने समताका सञ्चालक उत्तम सञ्जेल प्रहरी नियन्त्रणमा
काठमाडौं । समता स्कुल तथा अस्पतालका सञ्चालक उत्तम सञ्जेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। कर्मचारीले आत्महत्या गरेको विषयलाई लिएर आफन्तले आन्दोलन थालेपछि सञ्जेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। समता अस्पताल बौद्धमा कार्यरत रामेछाप दोरम्बाकी..
कर्णाली नदीमा जीप खस्यो, जीपमा सवार १६ जना वेपत्ता
हुम्लाको खार्पुनाथा गाउँपालिका ५को खार्पुनाथ बाट याक्चु कुना जाँदै गरेको महेन्द्र पिक अप लु १ ज ७१६६ नम्बरको गाढी बेणुबिसौना र कैलेबालुको बिचखण्ड बाट गाडी कर्णाली नदिमा खस्दा खार्पुनाथ गाउँपालिका..
हरेक छोरीलाई २० बर्षसम्म मासिक सय रूपैयाँ भत्ता
दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्मार्ट छोरी, बिहेवारी बीस वर्ष पारि’ भन्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सो कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिए..
भूकम्पपीडितले असार मसान्तभित्र पहिलो किस्ता नलिए, ३ लाख अनुदान कहिल्यै नपाउने
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हालसम्म अनुदान सम्झौता नगरेका लाभग्राहीहरूले असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता नलिएमा लाभग्राही सूचीबाट हटाउने भएको छ । प्राधिकरणले लाभग्राहीहरूले यही असार २१ गतेभित्र अनुदान सम्झौता गर्न र..
राजश्व चुहावटमा २ सय ३८ जनाविरुद्ध १८ अर्बको बिगो दाबी
काठमाडौं । राजश्व अनजुसन्धान विभागले चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व चुहावटका ८१ वटा कसुरमा अनुसन्धान सकेको छ । विभिन्न ८१ वटा कसुरमा अनुसन्धान सम्पन्न गरी २ सय ३८ व्यक्तिविरुद्ध बिगो र जरिवना..
बेल्चाले मकै गोडदै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ सक्दै
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा देशभर राज्यकोषको दुरुपयोग भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदनमा आवाज उठाएको छ । सोमवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्दै..
‘प्रदेश ३ को ४७ अर्ब ६० करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ३ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६ ०७७ को लागि ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उक्त बजेटमा चालुतर्फ २४ अर्ब ४६..
राजधानीको भद्रकाली अगाडि रगत पोख्ने ९ जना पक्राउ
Posted on Jun 15 2019
काठमाडौं । राजधानीको भद्रकालीमा प्रदर्शनको क्रममा राँगाको ९ ड्रम रगत बगाउने ९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मोहन शमशेर राणा नेतृत्वको हिन्दराष्ट्र स्वयंमसेवक दलले निकालेको जुलुसको क्रममा प्रदर्शनकारीले ड्रममा बोकेका..
गुठी विधेयकबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे पूर्वराजाको चासो र चिन्ता व्यक्त
काठमाडौँ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गुठी विधयेकबाट मुलुकमा उत्पन्न परिस्थितिबारे गहिरो चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हाल थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा रहेका पूर्वराजा शाहले शुक्रबार केही नेपालीहरुसँगको अनौपचारिक भेटघाटका क्रममा..
स्कुटरबाट झरेर नारायणीमा हाम फालिन् युवती
चितवन । दाजुको स्कुटर पछाडि बसेर आएकी एक युवती स्कुटरबाट झरेर नारायणीमा हाम फालेकी छिन् । युवती पुलको रेलिङ चढेर नदीमा हाम फालेकी प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताए । पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकास्थित वीरेन्द्रनगरकी..
भरतपुरमा मतपत्र च्यात्ने माओवादीका कार्यकर्ता दोषी ठहर, जेल सजाय हुनसक्ने
काठमाडौं । जिल्ला अदालत चितवनले भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावमा मतपत्र च्यात्ने दुईजनालाई कसुरदार ठहर गरेको छ। बिहीबार जिल्ला न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले मतपत्र च्यात्ने तत्कालिन माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि मधुकर न्यौपाने र द्रोण..
खाली गाडी अब नेपालबाट भारत छिर्न नपाउने
विराटनगर । ढुवानीमा प्रयोग गरिने खाली गाडी विराटनगरको जोगवनी नाका हुँदै भारत प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी) ले जामका कारण जोगवनी बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको भन्दै..
प्रधानमन्त्री यूरोप जानु अघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका १४ वटा निर्णय यस्ता छन्
काठमाडौँ । सरकारले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री युरोप..
‘चक्रवाती तूफान ‘वायु’ को प्रभाव आज नेपालमा’ मौसमविद
काठमाडौँ । भारतमा विकसित भएको चक्रवाती तूफान ‘वायु’ को सामान्य प्रभाव आज (बिहीबार) नेपालमा पनि पर्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । मौसमविद मञ्जु बासीले चक्रवाती तूफान ‘वायु’का कारण..
५८ लाखसहित एक भारतीय पक्राउ
काठमाडौं । भारतबाट नेपाल भित्राउदै गरेको अवस्थामा बारा प्रहरीले करिब ५८ लाख नेपाली रुपैयाँसहित एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। बाराको सुवर्ण गाउँपालिका ७ स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रबाट प्रहरीले भारतीय..
चीनको विदेशी मुद्रा सञ्चित कति होला ?
काठमाडौं । चीनको विदेशी मुद्रा सञ्चयको कुल ३१ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको चीनको राष्ट्रिय विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन ब्यूरोले जनाएको छ । ब्यूरोद्वारा उपलब्ध गराइएको तथ्याङ्कमा भनिएको छ, ‘सन् २०१९को मेको..
एजेन्सी इरानले आइतबार स्वदेशमा निर्मित एकै पटकमा छ निशानामा प्रहार गर्नसकिने हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीलाई एक विशेष कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरेको इरानको राज्य सञ्चालित टेलिभिजनले जनाएको छ । “खोर्डाड–१५ नाम दिइएको उक्त हतियारले विरोधीको..
मध्यरातमा कास्कीबाट विप्लव माओवादीका १८ कार्यकर्ताको बैठक स्थल घेराहाली पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले शनिबार राति विपल्व नेतृत्वको नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीका कास्की जिल्ला सेक्रेटरीसहित १८ जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा ४ महिलासहित १३ पुरूष रहेका छन्। उनीहरूले कास्की, अन्नपूर्ण गाउँपालिका..
चार देशमा राजदूत सिफारिसः को कुन नेता निकट ?
काठमाडौं । सरकारले चार देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको हो। सरकारले अष्ट्रेलियाका लागि महेश दाहाल, कतारका लागि नारद भारद्वाज, स्पेनमा..
तपाईंको नजिक कसैले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको छ ? छ भने यसरी उजुरी गर्नुस् !
काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले उजुरी आह्वान गरेको छ । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३(२) बमोजिम नेपाल सरकारबाट गठित ‘सरकारी, सार्वजनिक र..
Results 1994: You are at page9of 67